RAHARAHA FANOLANAN-JAZA : Miseho ho mahay polisy ambony ilay voarohirohy
Manahy ny ray aman-drenin’ilay zazavavikely naolan’ny vadin’ny rahavavin-dreniny tao Tsararano, ny amin’ny mety ho tohin’ny raharaha. 6 novembre 2018
Efa voamarin’ny mpitsabo fa simba tanteraka ilay zaza, voamarina ihany koa fa ilay lehilahy io no tena nahavanon-doza. Efa any amin’ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona ny raharaha, nefa miseho ho mahalala polisy ambony ilay nahavanon-doza.
Takaitra mandra-maty entin’ity zazavavikely ity ny fanolanana nahazo azy, satria mbola norahonan’ilay olon-tsy vanona tsy hiteny amin’ny ray aman-dreniny izy ary tsy niteny tokoa fa namany hafa no nanambara ny zava-misy. Iharan’ny sazy araka ny voafaritry ny lalàna izay rehetra tratra manolan-jaza.